Kubatsira kwedu - Aojie Mould Co., Ltd.
1. Iyo kambani ine yehunyanzvi R&D uye yekugadzira timu, yepamusoro michina yekugadzira, hunyanzvi muforoma dhizaini tekinoroji uye yakanakisa muforoma yekugadzira tekinoroji. Kunyanya kune zvezuva nezuva zvinodiwa muforoma, dzakaonda-madziro mafuru, uye ekupeta mafuru. Iyo kambani inotora yazvino manejimendi modhi yekupa vatengi vane yakazara uye yepamusoro masevhisi. Uye kuomerera kune pfungwa yekupa vatengi neyakanakisa uye isinganetseke-isina muforoma dhizaini mhinduro. Izvo zvigadzirwa zvinotengeswa mhiri kwemakungwa uye zvakakunda kuvimba nekuzivikanwa kwevatengi vekunze nekune dzimwe nyika.
2. Kubva pane pfungwa yekuve nyanzvi, yakanatswa uye yakasimba, kambani ichaenderera nekuvandudza nekuvandudza nevanhu vane hunyanzvi kuti vaite zvinhu zvehunyanzvi uye nehunyanzvi manejimendi sisitimu. Gara uchivaka Aojie Mould mune yakasimba nyanzvi epurasitiki muforoma dhizaini uye yekugadzira bhizinesi!
3. Ngatinzwisise zvaunoda. Provide iwe nezvakanakisisa basa epurasitiki Kuumbwa michina. Isu tinoteerera kune yako yega technical technical. Shingairira kuve mold yako mutariri. Isu tinoteerera kune zvakadzama uye tinoperekedza iyo fomu. Isu tinoteerera kune mhando uye jekiseni hupenyu muforoma. Isu tinokoshesa mhedzisiro uye tinokupa iwe kusagadzikana-kusingaumbe.
4.Kurumidza kupindura: vimbisa kukupa yakadzama makotesheni mirairo uye ruzivo rwechigadzirwa munguva inokurumidza; vimbisa kugadzirisa zvigadzirwa zvaunoda munguva ipfupi; vimbisa kugadzira rakanakisa bhajeti chirongwa chako pamutengo wakanakisa kwazvo.
5. Zvigadzirwa zvemhando yepamusoro nemitengo: Kambani yedu inotenga zvakasiyana mbishi kubva kune vagadziri uye inotenga zvakasiyana mbishi muhuwandu hukuru kudzikisa mutengo wekambani, uye kuona kuti zvigadzirwa ndezvemhando yepamusoro uye zvine mutengo wakaderera, uye zvinobudirira kutora mukana. yekambani yedu chikero Kukosha kune vatengi